नेविसङ्घको सङ्गठन विस्तार खोजेका देउवालाई प्रतिप्रश्न: ‘अपूरो र बबुरो’ किन बनाइयो ? | Ratopati
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeअसार २२, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । आइतबार नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रमुख भ्रातृ संस्थालाई ‘अपूरो र बबुरो’ किन बनाइएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै प्रश्नसहित नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को एउटा समूह पार्टी कार्यालयको मूल ढोकामा प्लेकार्ड देखाउँदै आएको छ ।
२०२७ मा नेविसङ्घ अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाले आफ्नो पालामा देशैभरि नेविसङ्घ रहेको र त्यसले पार्टीलाई बलियो बजाएको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले सबै ठाउँमा जितेका थियौँ । नेविसङ्घ कहाँ छ आज ? गाउँमा छ ? स्कुलमा छ ? अहिले गाउँमा कहीँ पनि नेविसङ्घ देखिँदैन । गाउँ स्कुलमा जबसम्म नेविसङ्घ हुँदैन तबसम्म कहिल्यै पार्टी बलियो हुँदैन । त्यही नेविसङ्घ त हो नि पार्टी भन्ने । कहाँ छ नेविसङ्घ ? कतिपल्ट भन्ने ।’
नेविसङ्घले सङ्गठन विस्तारमा ध्यान नदिएकै कारणले कम्युनिस्टहरुले चुनाव जितेको दाबी थियो । देउवाले भने, ‘स्कुलमा नेविसङ्घ बनाउँदै बनाउँदैनन्, अनि हारेको हा¥यै छ । सबै ठाउँमा कहाँबाट कम्युनिस्टले जित्यो यहाँ ? कसरी जिते कम्युनिस्टहरु ? उनीहरुले गाउँगाउँमा सङ्गठन बनाए । काठमाडौँमा आएर बढ्ता–बढ्ता भाषण गरेर केही हुनेवाला छैन । गाउँमा जाउँ, गाउँमा । गाउँमा बनाऊँ, गाउँको स्कुलमा बनाऊँ नेविसङ्घ अनि मात्र झगडा गर्न आऊ । केही नगर्ने, मसित कुरा गर्ने ?’
अहिलेको कोही पनि विद्यार्थी नेताहरु भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने लायकको नभएको भन्दै लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको देउवाले भनाइ थियो । ‘म पनि नेविसङ्घको सभापति भएको हुँ । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेँ । तपाईंहरु कोही हुन सक्नुहुन्छ भोलि ? यस्तै हिसाबले लाज पनि छैन यहाँ ?,’ देउवाले यसरी आक्रोश पोखेका थिए ।
देउवाको यही भाषणमाथि प्रश्न उठाउँदै रिमाल नेतृत्वको समूह आइतबार पार्टी कार्यालयको मूलढोकामा प्लेकार्ड बोकेर उभियो । उनीहरुको त्यहाँको उस्थिति देउवाका लागि रुचिकर हुने कुनै थिएन । अक्रोशित हुँदै देउवाले उनीहरुलाई ‘तिमीहरु कोही बन्दैनौँ, कराएर हुन्छ ?’ भन्दै पार्टी कार्यालयभित्र छिरे ।
रिमाल समूहले ‘नेविसङ्घ खल्तीमा थन्क्याउन पाइँदैन, नेविसङ्घको पूर्ण विस्तार गरियोस्, नेविसङ्घ १० जनामा सीमित राखेर स्कुल, गाउँमा कसरी भेटिन्छ सभापति ज्यू ?, सभापति ज्यू ! नेविसङ्घ टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ जस्ता प्लेकार्ड अन्य नेताहरुलाई पनि देखाए । साथै बैठकमा कुरा राखिदिन अनुरोध पनि गरे । अधिकांश केन्द्रीय सदस्य ‘ठीक छ ठीक छ’ भन्दै कार्यालयभित्र छिरे ।
अन्तिम समयतिर आएका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरलाई उनीहरुले प्लेकार्ड देखाउँदै सोही कुरा सुनाए । तर बलायर जङ्गिए । बलायरले भने, ‘यहाँ कुराएर काम छैन । तिमीहरु कैका कैका गुटका होओ ? भागबण्डा गरिसकिएको छ । उनीहरुसँग कराऊ ।’ त्यसपछि विद्यार्थी र बलायरबीच भनाभन सुरु भयो ।
‘स्ववियु सभापति भएकाहरुले पनि काठमाडौँमा घर बनाएका छन् । हामीले बनाएको नेविसङ्घ तपाईंहरुले सकिसक्नुभयो । ठूला कुरा गरे हुन्छ ?,’ भन्दै बलायर थप जङ्गिए । बलायरसँगको चर्काचर्कीसँग उनीहरु नाराबाजीमा उत्रिए । महोल शान्त पार्ने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लागिपरे ।
बलायर, भण्डारीलगायतका केन्द्रीय सदस्यले नेविसङ्घको कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन केले रोक्यो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । बलायरले भने, ‘नेविसङ्घलाई अपूरो र तरुणदललाई बबुरा कहिलेसम्म बनाइराख्ने ? यहाँ पार्टी महाधिवेशन गर्ने कुरा छ, पहिले नेविसङ्घ र तरुण दलको त महाधिवेशन गर्नुहोस् ? कोरोनाले महाधिवेशनको कुरा रोकियो भन्नुहोला । पार्टीको गर्छु भन्दै कस्सिनुभएको छ । भ्रातृ संस्थाको गर्न सकिँदैन र ?’ यस्तै प्रश्न अन्य केन्द्रीय सदस्यको पनि रहेको थियो । तर उनीहरुले नेतृत्वबाट त्यसको जवाफ पाएनन् ।